M/weynaha Puntland oo ku dhawaaqay war ku saabsan doorashada 2019-ka, cadeeyeyna arrin la sugayey – Puntlandtimes
M/weynaha Puntland oo ku dhawaaqay war ku saabsan doorashada 2019-ka, cadeeyeyna arrin la sugayey
March 7, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlayey Idaacada BBC-da Laanteda Afka Soomaaliga ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in doorashada Puntland ay dib u dhacayso.
Madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in doorashadu ay ku dhacayso si mug iyo miisaan leh oo ah 08 January 2019, waxaana uu cadeeyey in aysan haba yaraatee jirin wararka sheegaya in mudo kororsi ay maskaxdiisa ka guuxayso.
Mr, Gaas ayaa sheegay in uusan awood u laheyn mudo kororsi iyo waqtigiisa oo uu ku darsado, isla markaasna ay rajeynayaan in doorashadu dhacdo, wuxuuna beeniyey wararka lays dhexmarayey.
Mar la weydiiyey in uu yahay musharax Madaxweyne ayuu sheegay in uusan waqtiga ka hadli Karin, balse uu hadda xoogiisa saarayo arrimaha shaqada u dhaartay ee Puntland.
Siyaasiin & Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxtinimada ee Puntland ayaa dhawaan sheegay in ay ka welwelsan yihiin qorshaha cadeynaya in mudo kororsi ay ku howlan tahay Xukuumada uu hogaamiyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Doorashada Puntland waxaa ka haray wax ka yar 10 bilood, waxaana lafilayaa in loolanka ugu adag uu dhexmaro Siyaasiinta oo hadda badankood kusugan wadamada dibada, isla markaasna xooga saaraya sidii ay dhaqaale ku heli lahaayeen.
asc dhaman waxa salamaya umada somaliyed melkasda oo jogan gar ahan umada reer puntland aad iyo aad ban ugu farax sanahy inaan aahay musharax 2019 puntland waxan cadenaya hadi lay dordo inaan dhaman soceliyo dhulka kamaqan gacan dawlada puntland ee ug roreso sool iyo sanag iyo cayn iyo dhaman inda gamaqan gacan dena puntland waxan ka codsanaya xidhibanada sharafda lee inaay codkoda isin sii hagar laaana sii aan ugu adeego dhaman umada puntland waxan rajenaya hadi laidoordo inla isodhoweyo sidi nabad iyo nolol waa ino iyo 8 janayo 2019 awbilahi dowfiiq dorasho xoor iyo xalaala ban filaya alle hayd xafido dhaman puntland guul iyo midnomo